Ny tsenan'ny voninkazo artifika Yiwu dia hita ao amin'ny distrika iraisan'ny varotra iraisam-pirenena yiwu 1 amin'ny rihana voalohany. Misokatra ny tsena manomboka amin'ny 9:00 maraina ka hatramin'ny 6:00 hariva. efa manana mihoatra ny 1000 ny magazay mivarotra isan-karazany ny voninkazo artifisialy sy voninkazo artifisialy ......
Ny tsenan'i Yiwu kitapo sy valizy dia ao amin'ny Rihana faha-1 an'ny tanàna ara-barotra iraisam-pirenena Yiwu Distrika 2, izay misokatra amin'ny 9 maraina amin'ny 5:30 hariva.
Ny tsenan'i Yiwu belts dia misy ao amin'ny distrikan'ny varotra iraisam-pirenena yiwu 3, misokatra manomboka amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 5:30 hariva Io tsena io dia mahatratra mihoatra ny 10000 mpivarotra, anisan'izany ny karazan-doko sy fitaovana isan-karazany toa ny fehikibo lehilahy, vehivavy fehikibo, fehikibo hoditra tena izy. , kapo ny landihazo sy rongony, PU fehikibo, fehikibo PVC sns ...
Ny tsenan'i Yiwu Futian, antsoina koa ny tsenam-barotra iraisam-pirenena Yiwu, dia hita ao afovoan-tanànan'i Zhejiang. Any atsimo atsimo no misy an'i Guangdong, Fujian ary Yangtze renirano renirano no ao andrefana. Any atsinanana no tanàna lehibe indrindra - Shanghai, manatrika ny fantsona volamena any Pasifika. I Yiwu izao no foibe fizarana entana amin'ny eran-tany. Namaritra ho toy ny tsena lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, ny banky eran-tany sy ny manam-pahefana iraisam-pirenena ......
Ny tsenan'ny kilalao Yiwu dia nanomboka tamin'ny faran'ny taona 1980. Tamin'ny voalohany, ny sehatry ny asa ara-barotra dia tany amin'ny distrikan'ny varotra iraisam-pirenena 1.Manana fivarotana 2250, faritra misy raharaham-barotra mihoatra ny 20000 metatra toradroa. Eo amin'ny sehatra lehibe dia mbola itarina izany. Misy karazana kilalao an'arivony ao amin'ny tsena. Amin'ny entana haondrana avy any Yiwu, ny 60 kilalao dia milanja 60%. Ireo marika Shinoa sy International dia nametraka frankisa eo amin'ny tsenan'ny kilalao Yiwu. Kilalao maro be no aondrana any Chine ary firenena sy faritra 200 mahery any ivelany ......
Ny tsenan-tsokosoko Yiwu dia hita ao amin'ny distrikan'ny varotra iraisam-pirenena yiwu, distrika faharoa, rihana faharoa, misokatra ny tsena manomboka amin'ny 9:00 maraina ka hatramin'ny 5:30 hariva. Ireo vokatra tafiditra ao: penina, taratasy, kitapo sekoly, mamafa, pensilihazo pensilihazo, kahie, sary, rakotra boky, tsiranoka fanitsiana ......
YIWU MISAOTRA NY FIVORIANA MARINA
Ny tsenan'ny kiraro Yiwu ankehitriny dia nafindra ho any amin'ny distrika NO.4 ao amin'ny tanàna ara-barotra iraisam-pirenena yiwu. Raha ao amin'ny gara yiwu ianao, dia afaka hatramin'ny 801 sy 802 ho tonga amin'ity tsena ity
Yiwu Shoes Market Opening Time amin'ny 9:00 ka 18: 00. Azonao atao ny mividy na mandidy ny karazana sy ny karazany tianao.
yiwu scarf sy shawls tsena hita ao Yiwu varotra iraisam-pirenena distrika faha-4, ny kapa sy ny shawls tsena Opening Time 09:00 - 18:00 ......
Iray amin'ireo vokatra lehibe amin'ny tsenan'i Yiwu ny firavaka. Ny tsenan'ny firavaka Yiwu indrindra dia ao amin'ny rihana faharoa amin'ny distrikan'ny varotra iraisam-pirenena 1. Afaka mahita ny fahazoana fitaovana toy ny akanjo sy ny kavina, ny kavina, ny kavina, ny fehin-tanana, ny peratra, ny firavaka, ny valahana ary ny sisa ......
Ny tsenan'i Yiwu huangyuan dia hita ao amin'ny sehatry ny asa mahasoa xiuhu, ahitana faritra 117mu, izay ahitana 42 metatra metatra tora-droa, miaraka amin'ny famatsiam-bola 14 miliara, ampiasaina io manomboka amin'ny volana aprily 2011. Ny tsenam-barotra Yiwu huangyuan manomboka amin'ny 7:30 ka hatramin'ny 20:30 amin'ny alina ......